Ny zava-bitan'ny Birao fizahan-tany Oganda androany dia dingana lehibe amin'ny fanarenana COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Oganda » Ny zava-bitan'ny Birao fizahan-tany Oganda androany dia dingana lehibe amin'ny fanarenana COVID-19
Septambra 23, 2020
Androany, afaka mirehareha ny Birao fizahan-tany Oganda (UTB). Ny talen'ny fizahan-tany Oganda Lilly Ajarova sy ny mpiandraikitra ny fiantohana kalitao Samora Semakula dia nangataka ny 24 aogositra ho an'ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka . Ho fanampin'ny fanombanana tena, UTB dia nanisy fangatahana fanombanana tsy miankina.
Ny Safer Fizahan-tany Safer dia azo alaina amin'ny toeran-kaleha sy ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany mifototra amin'ny fanombanan-tena. Amin'ny alàlan'ny Birao Fizahan-tany any Oganda manampy ny safidy manan-danja ary handeha lavitra kokoa amin'ny fanombanana, dia mampiseho fanoloran-tena manan-danja ary fomba iray hijerena indroa ny politika napetraka.
Dr. Peter Tarlow no lohan'ny fizahan-tany Safer ary koa mpikambana ao amin'ny ekipa Project Hope momba ny fiarovana sy ny fiarovana ataon'ny Birao fizahantany afrikanina . Niara-niasa tamin'i Oganda izy tamin'ny taona 2019, ary Oganda koa tsy nisalasala nivoaka tamina hery feno hiadiana amin'ny krizy ara-pahasalamana.
Ny Birao fizahantany any Oganda dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Birao Afrikana fizahan-tany.
Cuthbert Ncube an'ny Birao fizahantany afrikanina Hoy izy: "Faly tokoa aho rehefa miarahaba an'i Lilly sy ny Birao fizahan-tany any Oganda nanatevin-daharana ireo kapitenin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny fandraisana ny - Tombo-kase fizahan-tany azo antoka. Satria ny ankamaroan'ny firenena mpikambana dia manokatra tsimoramora ny sisin-taniny dia zava-dehibe indrindra izany, ny fanarahana ny fepetra fitandremana.
Oganda dia mpandray anjara stratejika sy manan-danja amin'ny kaontinanta amin'ny fitantanana ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-karena any amin'ny faritra, ny Fambolena indray dia hanaiky, hanohana ary hiara-hiasa amin'ireo firenena izay milalao horonantsary lehibe eo amin'ny fitantanana ny toerana aorian'ny COVID-19.
Taorian'ny iray volana nisian'ny atidoha nikotrika sy nandinika antontan-taratasy sy dinidinika manan-danja, ny Birao fizahan-tany Oganda izao dia vonona tsara indrindra hanatanteraka ireo singa rehetra ilaina hiasa arak'izay azo atao toy ny toerana fitetezam-paritra sy fizahan-tany malaza.
Ny tomban'ezaka tsy miankina dia mihoatra ny fanombanana ny tena amin'ny fomba lehibe. Manome fahatokisana bebe kokoa ny tombo-kase. Manome fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny Birao fizahan-tany any Oganda izany amin'ny tsy fisalasalana hanaraka ny dingana fanampiny.
Tsy tombo-kase ny tombana, fa dingana iray, ary nankatoavina ny Birao fizahan-tany any Oganda ankehitriny ary afaka mampiseho ny tombo-kase manga misy tombana Tombo-kase fizahan-tany azo antoka mpihazona.
Fandikana ny taratasy fankatoavana any amin'ny Birao fizahan-tany any Oganda
Ry Ramatoa Ajarova sy Andriamatoa Semakula:
Faly sy voninahitra lehibe tokoa no tianay homena ny Birao fizahan-tany any Oganda miaraka amin'ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka kokoa an'ny Rebuilding Travel.
Miorina amin'ny fampahalalana nomenao ny fikambanana Safer Tourism momba an'i Uganda, dia namboariko ity tatitra manaraka ity ho an'ny UTB.
Ny fizahan-tany dia iray amin'ireo indostria mitarika an'izao tontolo izao ary fitaovana fampandrosoana lehibe toekarena, ary noho izany, ny fiarovana (heloka bevava sy ny asa fampihorohoroana) dia misy akony lehibe amin'ny fizahan-tany, fitsangantsanganana an-tsambo ary toekarena miompana amin'ny hetsika. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny tany dia voan'ny areti-mandringana COVID-19, ary ny vokany amin'ny fizahan-tany dia nanimba
Manaiky ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny fizahantany ny governemanta Ogandà. Fantatra eran'izao tontolo izao i Oganda noho ny hatsarany voajanahary, ireo karazany maro manintona azy, ireo vohitra manan-tantara ary ny bibidia ao aminy. Ny indostrian'ny fizahantany Oganda dia tsy fitaovana fampivoarana ara-toekarena lehibe fotsiny fa singa iray lehibe amin'ny kalitaon'ny fiainana Uganda.
Afaka mirehareha be i Oganda satria maro amin'ireo mpiasam-panjakana no tsy marefo amin'ny fizahan-tany. Takatr'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany sy ny fiantraikan'ny fizahan-tany ny lazan'ny firenena ary ny toerany tsy eo amin'ny fizahan-tany ihany fa eo amin'izao tontolo izao koa.
Amin'izao tontolo ankehitriny anjakan'ny valanaretina COVID-19 izao, dia samy mitaky fiarovana sy fiarovana napetraky ny matihanina voaofana tsara ny olom-pirenena sy ny mpitsidika eto an-tany. Ny vahoaka mpandehandeha dia mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fiarovana, ny filaminana, ny lazany, ny fivelarana ara-toekarena ary ny fahasalamana. Ireo lafin-javatra dimy ireo raha atambatra dia antsoina hoe antoka fizahan-tany. Ny tsirairay amin'ireo lafin-javatra ireo dia ilaina amin'ny fahazoana tombo-kase momba ny fizahan-tany azo antoka kokoa ary mampiseho fa ny tompon'andraikitra nomena dia manao izay rehetra azo atao mba hahazoana antoka fa azo antoka ny haavon'ny fizahan-tany. Manaiky ny tombo-kase fa tsy misy fiarovana sy filaminana 100% manerantany. Noho io antony io no nampiasan'ny tombo-kase ny teny hoe "fizahan-tany azo antoka." Izy io dia manondro fa ny fikambanana nomena tombo-kase toy izany dia nametraka programa mpiantoka fizahan-tany mavitrika izay mitaky famerenana, fanitsiana ary fanavaozana hatrany. Ny Safo fizahan-tany Safer dia nanaiky fa ny fikambanana nomena dia mahatakatra tsara fa misy fepetra vaovao tokony hampidirina rehefa misy ny toe-javatra misy.
Noho io antony io dia manolotra ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka kokoa ho an'ny fizahan-tany fizahantany, orinasa ary toerana eo an-toerana izay manaiky ny asan'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ny fiarovana ny vahininy sy ireo miasa ao amin'ny indostria. Ny teny filamatran'ny tombo-kase dia: "fiarovana, filaminana ary fahasalamana aloha."
Ny Minisiteran'ny fizahantany any Oganda tamin'ny resaka nifanaovana tamin'ny fizahan-tany momba ny fizahantany dia naneho fa takany fa ny fiantohana fizahan-tany dia misy fiofanana, fanabeazana, fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko, ary ny fahatakarana fa ny filaminana / antoka dia tsy fifehezana tsotra. Ao anatin'ny vanim-potoana fiovana lehibe sy fanamby manomboka amin'ny olan'ny fahasalamana ka hatramin'ny filaminana, ny Minisiteran'ny fizahantany any Oganda dia naneho fa manaiky ny zava-misy fa ny mpiasan'ny fizahan-tany dia hanana fiofanana tsy miova ary tokony hahay handanjalanja tsara mba hanitsiana ny fomba fanaony amin'ny fiovana tsy tapaka. tontolo iainana.
Ny Minisiteran'ny fizahantany any Oganda dia naneho ny fahavononany ho amin'ny fiadanam-piainan'ny fizahantany amin'ny alàlan'ny resadresaka an-tariby roa an-telefaona ary amin'ny famaliana amin'ny fomba feno amin'ny fanoratana fanontaniana marim-pototra momba ny fizotrany momba ny fahasalamana sy ny fiarovana, tsy noho izy ireo mifandraika amin'ny areti-mandringana ankehitriny fa koa amin'ny azy ireo mifandraika amin'ny politikan'ny fizahantany amin'ny ankapobeny.
Nasehon'ny Minisitera tamin'ny alàlan'ny resadresaka am-bava sy tamin'ny fanoratana fa nandray anjara tamin'ny famoronana vokatra fizahan-tany azo antoka kokoa izy ity. Nasehony tamin'ny mpikaroka momba ny fizahantany Safer ihany koa fa i Oganda dia manao izay rehetra azo atao mba hamoronana tontolo azo antoka sy azo antoka ary salama amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo masoivoho iraisam-pirenena, amin'ny fandraisana anjara amin'ireo masoivohom-paritra, ary amin'ny fifandraisana amin'ny fiarovana ny fizahantany sy ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana.
Ny minisiteran'ny fizahantany any Oganda dia nanondro fa mandray fepetra mihetsika izy mba hanomezana toky ireo mpitsidika ny traikefa azo antoka indrindra amin'ny fizahan-tany. Fantatry ny Minisitera tsara fa tsy misy olona afaka manome toky ny fiarovana sy filaminana 100% ary tsy hisy olona harary. Ny azony atao dia ny manome ny fepetra azo antoka indrindra momba ny fizahantany. Noho io antony io dia nitatitra ny governemanta fa:
Oganda dia tsy maintsy manohy mamorona sy manavao ireo paikadim-pahasalamany sy azo antoka amin'ny fotoana ilana azy sy isam-paritra.
I Oganda dia tsy maintsy mametraka protokolan'ny fahasalamana, fidiovana, famonoana otrikaretina, fanalavirana ary fiarovana ary azo ampiharina amin'ny fampiharana ny governemanta.
I Uganda dia manaraka ny torolàlana momba ny fandavana lavitra ara-tsosialy iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa sy ny mpitsidika ary miasa hamorona vahaolana tsy misy mikasika raha ilaina izany Ny firenena dia mampihatra politika tsy misy mikasika na aiza na aiza ary raha mety ary mampiasa teknolojia hampihena ny fifandraisana ara-batana amin'ny hotely, trano fisakafoanana, toerana fitaterana, sns.
Oganda dia namolavola politika PPE mora vidy sy azo tanterahina.
Ny minisiteran'ny fizahantany any Ogandà dia mitaky ny fanaovana sarontava rehefa misy fifandraisana manokana rehefa latsaka ny 2 metatra ny olona. Toy izany koa ny lalàna mifehy ny fitateram-bahoaka.
I Oganda dia mangataka ny fanasana tanana matetika sy ny fanadiovana ny efitranon'ny hotely sy ny toerana ampahibemaso na fitaovana ampiasain'ny besinimaro.
Manao ny fomba rehetra hanadiovana ny efitrano fatoriana ho an'ny vahiny ny firenena. Tsara homarihina fa manome fiheverana manokana ny fampiharana ny fepetra fanadiovana sy famonoana otrikaretina any amin'ny faritra iraisana i Oganda (toy ny trano fidiovana, efitrano, lalantsara, fiakarana sns) ho fepetra fisorohana ankapobeny mandritra ny areti-mandringana COVID-19 iray manontolo.
Omena ihany koa fijerena manokana ireo zavatra izay voakitika matetika toy ny tahony, bokotra ascenseur, fantsom-batana, switch, vavahady, sns. Ireto manaraka ireto dia ampiharina amin'ny efitrano na faritra manokana tratry ny tranga COVID-19:
a) Ny faritra rehetra izay maloto noho ny tsiambaratelon'ny taovam-pisefoana na tsiranoka hafa an'ny olona marary, ohatra ny kabine, koveta fanasana tanana, ary fandroana dia tokony diovina amin'ny famonoana otrikaretina isan-tokantrano.
b) Fitaovana fanadiovana mitondra kaody miloko amin'ny faritra samihafa hisorohana ny fandotoana.
c) Ny mpiasan'ny serivisy dia mitaky fiofanana fanampiny amin'ny fanomanana, ny fikirakirana, ny fampiharana ary ny fitahirizana ireo vokatra ireo, ny ankamaroan'ny solifotsy, izay mety mifantoka bebe kokoa noho ny mahazatra.
d) Isaky ny azo atao dia amporisihina ny fampiasana fitaovana fanadiovana azo ampiasaina fotsiny. Izay fitaovana fanadiovana vita amin'ny lamba sy fitaovana mpitroka, ohatra: ny lohan'ny mop sy ny lamba mamafa, dia ariana.
e) Ireo entana ampiasaina rehetra dia tsy maintsy raisina araka ny tokony ho izy mba hanalefahana ny loza mety hitranga. Ireo entana azo ariana (lamba famaohana tanana, fonon-tànana, sarontava, tavy) dia tokony hapetraka ao anaty kaontenera misy sarony ary ariana araka ny drafitry ny hetsika fandraisam-bahiny sy ny lalàna nasionaly momba ny famonoana otrikaretina fitantanana fako.
f) Ny ekipa mpanadio dia zarina amin'ny fampiasana PPE sy ny fidiovana amin'ny tanana.
g) Ny efi-trano rehetra sy ny faritra iraisana dia tokony asiana rivotra isan'andro.
Araka ny nomarihina, ny governemanta dia miasa mba hanomezana mpanadio tànana mifanaraka amin'ny filan'ny besinimaro sy ny sehatry ny fizahantany. Ny Saniterers mandeha ho azy sy mandeha amin'ny tanana dia napetraka amin'ny faritra saro-pady rehetra ary mitohy hatrany.
Ny governemanta dia nametraka programa fiofanana ho an'ny toerana fizahan-tany sy ny orinasa rehetra momba ny fampiasana ny fisarahana ara-batana ary miaraka amin'izay koa dia mahatsapa ny filan'ny ekolojika sy ny toetr'andro.
I Uganda dia mijery manokana ireo tobin'ny fitaterana toy ny tobin'ny seranam-piaramanidina ary manantitrantitra ireo ivon-toerana fitaterana iraisam-pirenena sy orinasa toa ny seranam-piaramanidina mba hanaraka ny “Takeoff: Tari-dalana momba ny fitsangantsanganana an'habakabaka amin'ny alàlan'ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka COVID-19.”
Ny mpamaly voalohany an'i Ogandà dia nampiofanina tamin'ny fampiasana fitaovam-piarovana manokana sy ny fikirakirana tranga amin'ny krizy ara-pahasalamana. Manokana fiheverana manokana ho an'ny fiarovana ny valin-kafatra voalohany sy ny an'ny vahininy.
Ireo masoivohon'ny governemanta Oganda dia mahatakatra tsara fa rehefa miseho ny toe-javatra na ny fiovana izay mety tsy maintsy ovain'ny politikany ihany koa mba hiarovana ireo mpitsidika amin'ny faran'izay mety.
Oganda dia manana hopitaly manokana vonona COVID-19 izay tsy voafetra ho an'ny tsy marary.
Nandritra ny vanim-potoana COVID-19, takatr'i Oganda fa tsy maintsy arovany koa ireo mpitsidika azy amin'ny endrika fandrahonana hafa amin'ny fizahan-tany toy ny asan-jiolahy. Ny fiarovana ny mpitsidika sy ny fisorohana ny heloka bevava amin'ny fizahan-tany dia ho lohalaharana amin'ny politikan'ny fizahan-tany.
Oganda dia manavao ny politikam-pizahantany ary manavao ireo manampahaizana manokana momba ny fizahantany isan'andro.
Mirehareha noho izany, ny fizahantany Safer, hanome ny Minisitry ny fizahantany any Oganda miaraka amin'ny Tombo-kevitry ny fizahantany azo antoka.
Dr. Peter E. Tarlow,
Lehiben'ny fanamarinana ho an'ny fizahan-tany azo antoka
Nosoniavina tamin'ny 23 septambra 2020
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Birao fizahan-tany Oganda: www.visituganda.com/
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Seal momba ny fizahantany azo antoka: www.fioritourismseal.com
Tatitra vaovao mahasoa amin'ny tsena 2-Methyl-3-butin-2-ol dia vinavinaina hitombo avo CAGR hatramin'ny 2029
Ny governemanta, ny manam-pahaizana dia mamantatra ny fihenjanana misy fiatraikany amin'ny fanarenana ny fizahan-tany
Vaksinin'ny COVID Sinopharm? Manahy ny olona any Seychelles, ary toy izany koa ny WHO